वरिष्ठ कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठलाई कोरो’ना भा’इरसको सं’क्र’मण , परिवारमा रहेका पाँच जनामा पुष्टि ! – Online Khabar 24
वरिष्ठ कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठलाई कोरो’ना भा’इरसको सं’क्र’मण , परिवारमा रहेका पाँच जनामा पुष्टि !
April 19, 2021 April 23, 2021 by admin admin
काठमाडौँ – वरिष्ठ कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठलाई कोरो’ना भा’इरसको सं’क्र’मण भएको छ। श्रेष्ठ सहित उनका परिवारमा रहेका पाँच जनाको कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको हो।
श्रेष्ठले सामाजिक संजाल मार्फत श्रेष्ठ सहित उनका छोरा ,छोरी, बुहारी र नातिनीमा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको जानकारी गराएका हुन्। कोरोना भाइरस संक्रमण भएपश्चात श्वास फेर्न गार्हो भएको श्रेष्ठको भनाई छ।
श्रेष्ठले लाप’रवाही गर्न र कोरो’ना भाइर’सलाई खेलाँची नगर्न सम्पूर्णमा आग्रह पनि गरेका छन्। श्रेष्ठले फेसबुकमा लेखेका छन्,”म लगायत मेरा छोरा ,छोरी, बुहारी र नाति’नी पाँचै जनालाई को’रोना पोजे’टिभ देखिएको छ!”
कोरो’नाबाट बच्न सक्दो प्रयास गर्न आग्रह गर्दै श्रेष्ठले फेसबुकमा थप लेखेका छन्,”कोरोना संक्रमण भइसकेपछि सास्ती चाहिँ हुने रहेछ। त्यसैले यो भाइ’सलाई खेलाँची नगर्नु होला ! जति सकिन्छ को’रो’नाबाट सतर्क रहनु होला ! Birthday wish गर्नु हुने सबै लाई धेरै धेरै धन्यबाद !”
साभारः बिगुल न्युज
Prevयि क्षेत्रमा विद्यालय ब’न्द गर्ने सरकारको निर्णय
next१ हप्तामा १० हजार भन्दा बढी कोरो’ना सं’क्रमित थपिए, लकडा’उन होला त?